Jamaica Ividiyo suite D.T. Lake Geneva amaxabiso Winter
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguKevin
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKevin iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le yeyona ndawo iNicest kuMgodi weCove sisiGqeba seVidiyo yeJamaica. Inayo i-2 Smart Tv's 55' kunye ne-42', i-32' ye-Bedroom kunye ne-27 'Dell esweni lokudlala. 2 Iinkqubo zeBluetooth Igumbi linombhede weKumkani kunye ne-Jamaican flair. kubandakanywa i-Hot tub, indawo yomlilo kunye nekhitshi. Ibala lepropathi linamadama okuqubha ama-2 iibhafu ezi-2 ezishushu kunye negumbi lomdlalo wevidiyo. Le propathi ilungile ngaphaya kwesitrato ukusuka eLake Geneva kwaye ingaphantsi kwebhloko kuyo yonke indawo yokutyela kunye nemivalo edolophini Indawo egqibeleleyo.
Le yipropathi ephezulu eLake Geneva eyona ndawo ibalaseleyo kuyo yonke idolophu yokuhlala iisuti ezinkulu kunye namachibi amakhulu okuqubha kwisiXeko. iyunithi yam ihlaziywe ngefanitshala ye-oki iitawuli ezintsha kunye nezinto zokulala kunye nophuculo olungakumbi oluza kuza kungekudala kwaye awuyi kuba nokunqongophala kwezikrini zevidiyo ukuze ubukele uzonwabisa owuthandayo okanye uqhagamshele inkqubo yakho yokudlala ifowuni yethebhulethi okanye ikhompyuter ilungele umhambi weshishini. nge-Wi-Fi ye-intanethi ye-intanethi ye-DirecTV esisiseko kunye naziphi na ii-apps ze-intanethi ongathanda ukuzidibanisa ezifana ne-Hulu Netflix njl.
ILake Geneva yindawo ekumgangatho ophezulu kwaye intle kakhulu lihabhu leeholide kwabo bajonge ukuphuma kugqatso lweempuku zaseChicago indawo egqibeleleyo yokubalekela iindawo zokutyela ezinkulu ezinqabileyo kunye nokuzonwabisa okuhlala kuyo yonke indawo ngakumbi ngeempelaveki ehlotyeni ICove ibonelela ngokuphila ukonwabisa ngoMgqibelo nangeCawe ngedama lokuqubha kunye nesilayidi esigcweleyo samanzi kunye nendawo engekho nzulu yabantwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Kevin
amaxesha amaninzi ndizakuba lapha ukuze ndikuvumele kwiyunithi eli likhaya lam phakathi evekini ndonwabe kakhulu ukuphendula imibuzo kwaye ndinike iingcebiso ngendawo yokutya kunye nezinto ekufuneka zenziwe kwakhona ndiyi-ejenti yokuhamba kwaye bendisiza. kule dolophu iminyaka emalunga nama-40 😎
amaxesha amaninzi ndizakuba lapha ukuze ndikuvumele kwiyunithi eli likhaya lam phakathi evekini ndonwabe kakhulu ukuphendula imibuzo kwaye ndinike iingcebiso ngendawo yokutya kunye…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$400
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lake Geneva